THBP: ရခိုင်ဝတ်စုံနန်.မလှရေ ရခိုင်သမ
ကွန်ပျူတာကလေ့ တချိန်လုံး Hang နီရေဂါ။ မောက်စ်ကိုတောင် မကိုင်ဝံ့ဗျယ်။ ဟောင်းဗျယ်ကိုး။ အဆိုးအဆာချေ ဝယ်ထားစော်။ ဈီးယလောက်ထိ မကြီးစော်ထဲက။ ၃နှစ်လုံးလုံး အပြောင်းသုံး အပြန်သုံး ကျောက်လို. ကန်လို.သုံးလာစော်။ မပျက်စော် ကို ရှိခိုးဦးတင် ကျေးဇူးတင်ရဖို.။ အေလဆိုကေ ကွန်ပျူတာကို ShutDown မလုပ်စော် ၃လပြည့်ဖို.ဗျယ်။ ဟီးဟီး။ လူရှိကေလေ့ဖွင့်ထား လူမရှိကေလေ့ဖွင့်ထား ။ ကွန်ပျူတာနဲ. နပန်းလုံးနီတုံး (ကိုယ်အရှုံးရာ) အခန်းဖော်ကဝင်လာရေ။ လက်ထဲမှာလေ့ ပိတောက်ခြောက်ရောင် ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ. မျက်စိတောင်ကန်းဖို.။ ဇာလေးဆိုမှာ ရခိုင်ဝတ်စုံလတ်။ ခရစ်စမတ်မှာ ရခိုင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးကေ တေးခြင်းဆိုဖို.ကျရေဆိုဂါ။ သူက ခရစ်ယန်။ ဘဇောင် အရောင်တရောင်လေဂု။ ကိုယ်အမုန်းဆုံးအရောင်နဲ.မှ တတည့်လာကျရေဂါ။ ယူကြည့်လိုက်တေ တနားချေ။ ရခိုင်ဝတ်စုံက ဘရားစူး မိုးကြိုးပစ်။ အသားလို.လေ့ မကောင်း။ ပုံကလေ့ မကျ။ ယေဂေလေ့ မဝတ်ရစော်ကြာဗျယ်ဆိုဂေ တနားချေ ဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာရေ။ ယဂေ ဝတ်ကြည့်မှာ ခြုပ်ပီးစော်မမကို ရွှေတံဆိပ်ဆု ချချင်စိတ်ပေါက်လခရေ။ ရင်ခံက ကျပ်တေ။ အထက်က အင်းကျီက ကျကေ တိုနီရေ။ ထဘီကကျကေ သန်နဲ.ကြီးနဲ. ဝတ်လို.ပင်မနိုင်။ ဇာပိုင် ခန္ဓာအတွက် ခြုပ်ပီးလိုက်တေဂ မဆိုနိုင်။ ယဂေလေ့သင့် ဝတ်ဖို.ကျဗျယ် မနားယေ ဇာတတ်နိုင်ဖို.။ ဓါတ်ပုံတိတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိ တပျင်းရိုက်ပလိုက်တေ။ ၁၀ ပုံလောက်ရိုက်မှ ၁ပုံ လှစော်ထွက်ဖို.စော်။ အံ့သြောဖို.ကောင်းစော်က အပုံ၂၀လောက်ရိုက်စော်မှ ပုံကျစော်ချေ တပုံတောင်မှ မပါ။ အမှတ်တရပလေ။ နောက်တခါ ဝတ်ဖြစ်ဖို.ဆိုစော် မလွယ်။
မှတ်မိသိရေ ရခိုင်ဝတ်စုံကို နောက်ဆုံးဝတ်ခစော် စစ်တွေ လောကနန္ဒာဘုရား အုပ်မြစ်ချပွဲမှာ ဗန်းကိုင်ခခါက။ ယင်းခါက ကိုယ် ကုသိုလ်ယူခရေ ဘုရားကို ဘုရားတည်ပြီးခါမှ ကိုယ်တခါလေ့ မဖူးရသိထော။ မှတ်မိသိရေ ယင်းခါကိုယ့်ကို ဆင်ပီးစော် ဒေါ်နုမြသန္တာ။ ကိုယ်ကိုင်ရစော် ငွေအုပ်။ ခေါင်းမူးလို. အိမ်ကို ရခိုင်ဝတ်စုံနဲ. ပြန်လာစော် ဝတ်စုံတဝက်ရာပါလာရေ။ ထဘီ အသူချွတ်လို.သိမ်းထလိုက်လေမသိ။ ဆရာမ ဆွေဆွေသန်းလတ် နောက်ခါမှ သိရေ။ စကပ်နဲ.ရာ မပူကတ်ကေ့။ အချေခါကတော့ ရခိုင်ရိုးရာဝတ်စုံ ရက်ပြတ်ဝတ်ရရေ။ ကိုယ်ရို.က ပြည်တော်သာ ကျောင်းမှာတက်ခါ လူကြီးကြိုကေ အမြဲတမ်းကိုယ်ရို.ကျောင်းက ကြိုရစော်များရေ။ ဖြစ်စော်က ကျောင်းမှာ လူကြီးကြိုဖို. လူရွီးရေ အခါ အလှပလှ ဆိုက်တူ ဂိုက်တူချေတိကိုစီ ရွီးရေ။ ကိုယ်က မလှဂေလေ့ သူရို.နဲ. အရပ်တိုင်းလိုက်ခါ တဆိုက်တည်းဖြစ်နီရေ။ ဟီး။ ယင်းတွက်နဲ.စီ ပါလခရေ။ တခါပါပြီးကေ အတွိအကြုံရှိရေ လူကိုပဲ ဆက်လို.ရွီးရေဆိုခါ အမြဲတမ်းပါလခရေပ။ ကိုယ်လေ့ ကောင်းပျော်ရေ လိုက်ရကေ။ တခြားကြောင့် မဟုတ်။ လေယဉ်ကွင်းကို လားလို. ကြိုရကေ လူကြီးတိ အတွက် စီစဉ်ထားစော် အစားကောင်း အသောက်ကောင်း (အကျန်၊ လူကြီးတိ စားပြီးခါမှ ကိုယ်ရို.ကို ကျွေးစော်) ကိုစားရလို.။ ထုံးစံအတိုင်းပယေ။ မဆိုင်ကေလေ့ ပါလာစော်ပဲ အစားအသောက်အကြောင်း။
ယဂေ ပြောနီစော်အကြောင်းကို ပြန်ကောက်လိုက်မေ။ ဝတ်ရာ ဝတ်ရစော် ရခိုင်ဝတ်စုံနဲ. ကိုယ်နဲ.က သူတော်မနဲ. ခေါင်းဖြီးနဲ.ပိုင်။ တခုပိုင်လေ့ တတည့်မကျ။ အယင်ခါက ယောက်ခလျှာလုပ်ပြီးနီခစော် ဖြစ်လို. ယင်းခါကြည့်လို.မလှစော်ရာ။ အဂု ဆံပင်အရှည်နဲ. ယက်နဲ.ဆိုကေ ကြည့်ကောင်းချင်ကောင်းဖို.နန်းရာလို.ဆိုပြီး ဝတ်ကြည့်မှာ။ ဇာကဟုတ်ခီဖို.လေး။ ယင်းအတိုင်းသိ။